Magacaabistii Farmaajo Ee Mahdi Khadar Ma Sharcibaa Mise Waa Sharci Daro | Marsa News
Magacaabistii Farmaajo Ee Mahdi Khadar Ma Sharcibaa Mise Waa Sharci Daro
Hargeisa:(Marsanews) Sida ku cad dastuurka ku meel gaadhka ah ee dalka waxaa sharci darro noqoneysa in madaxweyne Farmaajo uu raysal-wasaare ku xigeenkii xukuumadda uu u magacaabo raysal-wasaare ku meelgaadh ah.
Qodobka 103-aad ee dastuurka dalka waxa uu qeexayaa xil-gaadhsiinta xukuumadda inta madaxweynuhu uu ka soo magacaabayo wasiirka koowaad ee xukuumadda bedeleysa.
Qodobkaas waxuu dhigayaa in Raysal-wasaaraha iyo golihiisa wasiirradu ay xilka sii heynayaan, iyaga oo shaqada dowladda sii gudanaya illaa xukuumad la soo dhiso ay kala wareegto.
Qodobka 103-aad ee dastuurka ayaa u dhigan sidan, “Inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud iyo marka Raisul-Wasaare cusub la dhaarin doono, Raisul-Wasaarihii hore ee xilka hayey iyo Golihiisa Wasiirradu waxay sii haynayaan xilka, waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee Dawlada si xilgaadhsiin ah.
Kadib markii guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu ku dhawaaqay in xildhibaanadu ay kalsoonidii kala noqdeen xukuumadda Raysal-wasaare Kheyre, Qadar kooban dabadeed Farmaajo waxa uu sameeyey magacaabis cusub.
Madaxweynaha oo wareegtadiisa ku balan-qaaday in uu deg-deg u soo magacaabayo raysal-wasaare cusub ayaa ku xigeenkii khayre oo ka mida xukuumada la riday, Mahdi Maxamed Guuleed u magacaabay sii-hayaha xilka Ra’iisul wasaaraha dalka, taas oo sida uu dhigayo dastuurku sharci darro ah.